Umphakathi wanamuhla ishintshile, zishintshe ezweni elaliyiSoviet Union. Uma ngaleso sikhathi umphakathi waphoselwa Taboo kuyo yonke into mayelana izindawo zangasese zokuphila, kodwa manje, ngeshwa, isimo sesishintshile kakhulu, abantu ukubufihla izifiso zabo, baye baqala ukukhuluma ngokusobala ngegciwane izintandokazi ngokobulili. Okuhle noma okubi, isikhathi uzokutshela. Nokho, ukuze ngiwufeze ngesikhathi wonke izenzakalo, kubalulekile ukwazi amanye amatemu. Kulesi sihloko sizoxoxa ngalokho nymphomania ngangokunokwenzeka ukuze ukubhekana nalesi sifo.
Hlobo luni eside?
Uma uya ukuchaza ngokuphelele inkinga, kufanele uqale nge kwencazelo umqondo. Phela, omunye ukuqaqwa eside anganikeza eziningi izimpendulo. Ngakho-ke yini nymphomania? Igama lesiGreki futhi yakhiwa izingxenye ezimbili. Eyokuqala - "nymphe", okusho ukuthi "umakoti" kanti eyesibili - "mania", okuyinto uhumusha njengoba "madness" noma "uthando".
Uma uthi nhlá Nakuba kungase kungakholakali, yini engalungile, uma umakoti abanothando? Kodwa kule nguqulo kuba, kunalokho, mayelana ubuhlanya kunokucabanga uthando elula, engesiyo alien, ngasendleleni, wonke umuntu ovamile. Nymphomaniac - ke kodwa ngowesifazane okhiphe cishe amahora angu-24 ngosuku, ufuna ukuba ningabi nje kuphela indoda yakhe, kodwa futhi bonke abanye abafana. Futhi lena ukuphambuka.
Efuna siqonde kangcono inkinga evamile, kumelwe futhi sihlole lokho umbono kufanele odokotela mayelana nalesi simo lapha. Ngakho, nymphomania - a sokugembula hypersexuality zesifazane. Kodwa lesi simo kuyingozi ngoba lihlotshaniswa ezihlukahlukene imibono fixed kanye izitayela ukuthi njalo kokuphishekela owesifazane, kokuzama engqondweni yakhe nje kuphela kodwa futhi umzimba. Phela, nymphomania angagcina ngezindlela ezimbili eziyinhloko: isifiso kokubili ukuze bathole injabulo eliphakeme kaningi ngangokunokwenzeka futhi isifiso sokuthutha abahlanganyela ubulili nabantu abaningi ngangokunokwenzeka. Kuthiwa kokubili ongakhetha ziyingozi impilo yonke wesifazane ovamile. Ngokusho imithi nymphomania - isifo, kunokuba umane umzimba wentombi.
Kwenzekani empilweni yakho?
Uma nympho ekhetha umgomo - kaningi ngangokunokwenzeka ukuze uthole orgasm, uyagijima ingozi ngokuphelele kuba ekhathele umlingani wakho, ngokwenyama hhayi kuphela, kodwa futhi khona ngengqondo. Le ndoda ngemuva ebusuku ungalahlekelwa konke okusemandleni abo ukuze bajabulise umama wakulowo inhliziyo, njengoba nasengqondweni isibambo, ngokokuziphatha ezibhuqiwe, ngoba abesifazane ngaso sonke isikhathi akwanele. ngenxa yalesi simo, futhi ngokuvamile kuba khona lenqwaba abahlukanisayo, ngoba lowaya muntu umane akakwazi ukumelana ukumelana umkakhe. Ngemva ukuqondanisa ezinjalo yezinto uyabuthola ngicindezelekile futhi ungaya beqisa - ukufuna umlingani, naphezu ukubukeka kwabo, isimo sami sezimali nezinye izinto ezifanele. Ikakhulu ngoba ladies kulesi simo kuyoba ubukhulu isithunzi Indoda impilo potency yakhe. Uma isimo sokuqala owesifazane akayikuvuma eziyingozi ngakho-ke yesibili igcwele lenqwaba izinqubo ezihlukahlukene sokuvuvukala uhlelo urogenital. Phela, isifiso izintokazi kumnandi bavame ukukhohlwa ukuthi isidingo ukuze bazivikele.
Come on, ngizitshela ukuthi nymphomania. It has izinhlobo ezine, okuyinto nakanjani kudingeka ukutshela:
1. nymphomania azalwa naso. Hypersexuality kule nguqulo kukhona intombazane kusukela ekuzalweni. Lezi abameleli ubulili fair in the main ziqale lapho isencane kakhulu ukuba alale naye, hhayi nandaba phi lingani.
2. nymphomania Kutholiwe. Lesi sifo, zingaphinde zivele noma ubudala, uma owesifazane enezinwele nezinkinga endocrine, zokuzala noma isimiso sezinzwa. Lesi sifo lihlotshaniswa hormone kahle noma ezahlukene angajwayelekile isimo sengqondo. Ukugula libhekene ukuphila okumatasa kakhulu abantu besifazane ngokocansi, orgasms liqhakazile, kodwa lapho kuntuleka wokwaneliseka ephelele.
3. nymphomania Climacteric. Lolu hlobo hypersexuality kwenzeka kwabesifazane ababhekene nambili kuya kwabadala. Nalapha futhi, bonke abahlanganyela ingemuva hormone, okwenza abesifazane senze ngokuvumelana nalokho.
4. nymphomania engokomfanekiso. Izimbangela leli subtypes isifo - ezihlukahlukene iziyaluyalu ezingokwengqondo, lapho owesifazane ngu injabulo yobulili, noma ngokusebenzisa i esebenzayo ushintsho abalingani nje uzama ukuqinisa ngokwabo.
Nalapha futhi, kufanele bathi lokhu isimo ladies okungukuthi ngempela eziyingozi empilweni. Phela, owesifazane, ezama ukwanelisa izidingo zabo, ngokuvamile nje bayakhohlwa ngokuqapha kanye nezindlela zokuvimbela inzalo.
Izimbangela nymphomania. usizo Isazi
Ukuhlaziya esifanayo, lokho nymphomania, qiniseka ukuthi ziyini izimbangela yalesi sifo. Ngakho, kuyafaneleka ethi lady kufanele kuqala afune usizo owelapha, abazama ukuqonda isimo ngokwengqondo bese ubheka izimbangela ukuziphatha okunjalo. Lapha lenqwaba ongakhetha: kungase kube isici imfundo, udlame locansi ngaphambilini abanolwazi, isifiso avele cool (nymphomania intsha esikhulakhulile ngengqondo), njll
Uma ingxenye ngokwengqondo kulungile, owesifazane kufanele uhlole emzimbeni wakhe. Njengoba sekuphawuliwe kakade, kwezimbangela eziyinhloko zesifo: eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa hormone, ukuphazamiseka kohlelo endocrine, izifo kwezitho ethile kwesimiso sokuzala, isici bokuphila izinqubo (isb, ukukhulelwa, noma ephuzile ukunqamuka). Ngokuphathelene okwatholakala ekuqaliseni odokotela Basikisela ukuthi nymphomania yangempela siwukuzibusa ngempela ezingavamile, kuphela izikhathi ezimbalwa amacala 5000. Yonke enye into - nymphomania ngengqondo, okuyinto iphathwa ochwepheshe ezifana odokotela bengqondo futhi psychotherapists.
Uma owesifazane enezinwele sifo, yiziphi izimpawu? Nymphomania elinesimo ukuziphatha ekhethekile we lady: angakwazi ukukhuluma ngezihloko ngokocansi, imikhuba ngokukhethekile ukunakekela indoda, njll
Ngokuphathelene injabulo yobulili, ke isiguli cishe never uthola, kungcono futhi omunye izimpawu by okwenza owesifazane angaba ngokuzimela ukunquma ukuthi enendawo lesi sifo. Futhi okubaluleke kakhulu, lokho kuyodingeka abhekane labo babe nymphomania isifo: izimpawu - okuxekethile namadoda ahlukene (konke lokhu kwenzeka ngoba isifo has a imvelo wave-like, lapho owesifazane ngesikhathi ukuhlaselwa ngokobulili uholwe Luhambo, hhayi umsebenzi ubuchopho).
Uma nymphomania wesifazane, indlela yokubhekana nalesi sifo? Njengoba sekushiwo ngenhla, kubalulekile ukufuna usizo owelapha, ngubani ngosizo ngezindlela ezahlukene ukuzama ucacise nentokazi ethile zokugula kwakhe. Kwaba ngemva Uyavuma ukuthi inenkinga, futhi ngeke ukubhekana nezimbangela zesifo, kungenzeka ukuqala ukwelashwa. Ngakho, ngidinga usizo sexologist ongachaza abesifazane abaningi (phela bekungaba libido kuqiniswa).
Ochwepheshe udinga ukufundisa ukufunda nokubhala abantu besifazane ukuba bagxile oyedwa. Inhloso yabo ukususa umgoqo ngokwengqondo ukuthi ngokuvamile kuvimbela ukuthola injabulo kusukela ubuhlobo nomunye uzakwethu.
Uma owesifazane nymphomania kweqiniso, nendlela yokubhekana nalesi sifo kulesi simo? Khona-ke udokotela kuyodingeka ukuba linqume Ukulawula libido. Nokho, kuyafaneleka ukuthi lolu hlobo isifo iphathwa nzima futhi eside.
Ukuphila Ngemva Ukwelashwa
Uma owesifazane nymphomania (nendlela yokubhekana naso, okuxoxwe ngazo ngenhla), futhi ngokuphelele ekungaphelelini isifo, kwenzeka ngempela esindayo ngesikhathi nokuvuselelwa. Ngakho, kunzima ukuba izintokazi bokuqala abake ngifuna uthando wahlala nabahlanganyeli abaningi, ikakhulukazi ngaphandle kokuvala phezu, nomuntu ukuba nobuhlobo bobulili. Kufika iphuzu criticality kanye nokulinganisa bo khe behavior. Owesifazane kancane kancane uyabona lokho okwenzeka kuye. Lesi isimo kuhle sina, sibhekane nabo unga ngosizo ochwepheshe. Futhi ingxenye Nymphomaniac wangaphambili kudingeka bavuselele ukuphila kwabo kusukela emanxiweni, ngenxa yokuthi ngokuvamile ilahlekelwa umndeni kanye nomsebenzi, abangane ufulathele wakhe.
Ubuza umbuzo ongafuni mpendulo: yini ebingenzeka uma intombazane isiphuzo "Viagra"?
Amakhandlela Bheka "Ketonal" - ukusetshenziswa kwezidakamizwa